Mpanamboatra sy mpamatsy lamba mangarahara ao China | Smartroof
Takelaka an-tampon'ny mangarahara
Takelaka tafo mangarahara PVC Polycarbonate:
Ny taila vita amin'ny PVC dia vita amin'ny resina polyvinyl chloride (PVC) ho akora fototra, ampiarahana amin'ny ASA anti ultraviolet agents sy ireo akora simika hafa, ary ampitahaina amin'ny siansa ary vita amin'ny haitao mandroso. Ny taila vita amin'ny PVC, fantatra amin'ny anarana hoe tile vy plastika ihany koa dia vokatra havaozina amin'ny taila vy miloko. Ny teknolojia fiaraha-miombon'antoka multilayer dia ampiasaina handrakofana ny sosona anti-antitra eo ambonin'ny vokatra, ary nohatsaraina ny faharetan'ny toetr'andro sy ny faharetan'ny loko, ary ny sosona tsy mahazaka hitafy dia ampidirina eo ambany. Izy io dia manana fanoherana afo, anticorrosion, toetr'andro, tsy misy singa asbestos, loko marevaka, fahasalaman'ny tontolo iainana. Izy io dia ampiharina amin'ny tampon-trano sy rindrina amin'ny valin-drihana lehibe, izay tsy vitan'ny mahafeno ny anticorrosion ny atrik'orinasa vy tsotra, fa mamonjy vy ihany koa ary mampihena ny vidiny.
Item Panels eo an-tampon'ny polycarbonate mangarahara PVC
Type manjary efajoro
Color Mangarahara / Manga / Maitso
Sakany tanteraka 1130mm
Ny sakany mahomby 1050mm
Length Araka ny baiko
hateviny 1.0mm / 1.5mm
Tombony manohitra ny tafo vy
Afaka mampihena ny hafanana
Afaka manakana ny feo
Fiadiana mahery vaika kokoa
Fampitana hazavana 75%
Fihetsika ambany amin'ny simika
Mavesatra maivana kokoa
Fampirantiana momba ny tetikasa
Tetikasa any Panama
1.Ny mpanamboatra anao na mpivarotra anao?
Eny, tena mpanamboatra izahay, raha mila vokatra manokana hafa ianao, dia hanao izay farany vitany
hanampy anao, amin'izay izahay afaka manangana fifandraisana orinasa maharitra.
2. Azoko atao ve ny manafatra ny vokatra amina habe manokana?
Mazava ho azy fa azonao atao, koa hamokatra ny vokatra arakaraka ny fangatahanao antsipirihany izahay.
3. Fa maninona izahay no safidinao tsara indrindra?
Manana orinasa mivantana sy traikefa fanondranana an-taonany maro izahay, ary manolotra ny vidiny tsara indrindra. Vokatra avo lenta, fandefasana ara-potoana, ary koa serivisy aorian'ny varotra tsara, noho izany manana laza tsara eo amin'ny tabilao sy mpanjifa maro no manana fifandraisana ara-barotra maharitra .
4. Inona ny fe-potoana ara-barotrao?
• Fandoavana: T / T 30% mialoha, fandanjalanjana alohan'ny fandefasana.
• Fotoana famokarana: ao anatin'ny 7 andro fiasana aorian'ny fametrahana 30%
• Fomba fandefasana: ny kaomandy kely dia halefa amin'ny express, ny baiko lehibe dia halefa amin'ny ranomasina.
Previous: Skylight House
Manaraka: Tafo mitafo vy
Roofing Pvc mitafo
Roofon-plastika mitafo vita amin'ny tafo PVC Hollow
Takelaka polycarbonate ho an'ny trano fonenana
Tafio tafo mitafo